‘सडक महोत्सवले अकुपेन्सी बढाएको छ’ – Arthik Awaj
‘सडक महोत्सवले अकुपेन्सी बढाएको छ’
By आर्थिक आवाज २०७५ पुष १६ गते सोमबार ०२:४३ मा प्रकाशित
होटलको अहिलेको अकुपेन्सी कस्तो छ ?
हाम्रो होटलमा अहिले अकुपेन्सी शत प्रतिशत छ । केही दिन अघिसम्म ७० प्रतिशत थियो । तर पोखरा सडक महोत्सवका कारण अकुपेन्सी बढेर शत प्रतिशत भएको हो ।
न्यू इयर इभको लागि प्रि बुकिङ कत्तिको भएको छ ?
प्रि बुकिङ राम्रो भएको छ । हामीले न्यू इयर इभमा विशेष सांगीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित गाला डिनर गर्छौं । त्यसको टिकट लिनेलाई मात्र प्राथमिकता दिएर होटलमा बस्न दिने गरेका छौं । किनकि हामीले गाला डिनरसहितको सांगीतिक÷सांस्कृतिक कार्यक्रम हाम्रो विशेष कार्यक्रम हो ।
चालु वर्षको अकुपेन्सीचाहिं कस्तो रह्यो ?
चालु वर्षको अकुपेन्सी औषतमा राम्रो रह्यो । अझ भनौं २०१७ भन्दा २०१८ मा होटलको अकुपेन्सी राम्रो रह्यो । झण्डै २० प्रतिशतले बृद्धि भयो होटलको अकुपेन्सी ।
गत वर्ष कति थियो यो वर्ष कति भयो होटलको अकुपेन्सी ?
यो वर्ष होटलको अकुपेन्सी ८० प्रतिशत रह्यो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष ६० प्रतिशत मात्र थियो अकुपेन्सी ।
होटल वाराहीमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक कुन बढी आउँछन् ?
हाम्रोमा धेरैजसो विदेशी पर्यटक नै हुन्छन् । यसअघि झन् बढी विदेशी पर्यटक थिए । अहिले भने नेपाली पर्यटक पनि आउने क्रम बढेको छ । हाम्रोमा ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटक बस्छन् । बाह्य पर्यटकमा विशेषगरी नेदरल्याण्डका डचहरु धेरै आउँछन् । त्यसपछि ब्रिटिसहरु पनि राम्रै आउँछन् ।
पोखरा सडक महोत्सवका कारण होटलको अकुपेन्सीमा कत्तिको फरक पार्छ ?
महोत्सवको कारण होटलको अकुपेन्सीमा राम्रो सुधार हुन्छ । प्रायः ८० प्रतिशत हुने अकुपेन्सी बढेर शतप्रतिशत पुग्छ । डिमान्ड बढेर दोब्बर÷तेब्बरसम्म हुन्छ । महोत्सवमा आउनेहरु आन्तरिक पर्यटक बढी हुन्छन् । उनीहरुसँग विदेशी पर्यटकको भन्दा कम रेट लिन्छौं । त्यसैले विदेशी पर्यटकबाट हुनेजस्तो फाइदा भने हुँदैन ।
समग्र पोखराको पर्यटनको अवस्था कस्तो रह्यो यो वर्ष ?
पोखराको पर्यटनको अवस्था यो वर्ष केही सुधार भयो । भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो बनेको पर्यटनमा यस वर्ष केही उत्साह थप्यो । पर्यटक आगमनमा बृद्धि आएको छ । यद्वपि उत्साहजनक भने हुन सकेन । सरकारी स्तरबाट प्रयास नहुँदा उत्साहजनक हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई । स्थानीय स्तरबाट गरिएको प्रयासले अहिलेको अवस्था भएको हो ।
कति पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमता छ वाराही होटलको ?
हाम्रो होटलमा ८० रुम छन् । ७३ वटा डिलक्स रुम छन्, ८ वटा सेमी स्विट रुम र २ वटा स्विट रुम छन् । हाम्रोमा एक दिनमा १६० जना बस्न मिल्छ । अन्य इभेन्टहरु गर्ने हलहरु छन् । बाहिर स्विमिङ पुलसहितको पार्टी गर्ने राम्रो ठाउँ छ ।
होटल वाराहीको प्रमुख विशेषता के हो ?
हाम्रो होटलको विशेषता भनेको सर्भिस र स्वादिष्ट खाना हो । यहाँ पारिवारिक वातावरण छ । यहाँदेखी भ्यूहरु सजिलै देख्न सकिन्छ । हिमालहरु पहिले सबै कोठाबाट देखिन्थ्यो तर अहिले त अग्ला अग्ला भवनहरु बनेकाले मुश्किल पर्छ । तैपनि हाम्रो होटलका माथिल्ला तलाहरुको झ्याल तथा बार्दलीबाट हिमाल र लेकसाइड पुरै देखिन्छ ।
न्यू इयर इभ विशेष केहि छ कि ?
न्यू इयर इभमा होटल वाराहीमा न्यू इयर इभ स्पेसल कार्यक्रम हुँदैछ । स्विमिङ पुल नजिकै रहेको इभेन्ट सेन्टरमा न्यू इयर इभ स्पेसल कार्यक्रम हुन्छ । कार्यक्रम राती ९ बजेदेखि मध्यराति १ बजेसम्म जारी रहनेछ । इभमा पप गीतमा आफ्नो छुट्टै छवि बनाएका कमल खत्री र माण्डवी त्रिपाठीले प्रस्तुती राख्नेछन् । लाइभ कन्सर्टका लागि साँझ साढे ७ बजेदेखि ढोका खुल्ला हुनेछ । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रति व्यक्ति ४ हजार रुपैयाँ टिकटदर तोकिएको छ । सो टिकटमा वेलकम ड्रिङ्क्ससहित बार्बिक्यु, स्न्याक्स र डिनर फ्रि हुनेछ ।
पहुँचका भरमा जहाजको टिकट वितरण हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती
सानिमाद्वारा घातक रोग सुविधा अन्तर्गतको चेक हस्तान्तरण
जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
गैरआवासीय नेपाली संघले गर्‍यो नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत
पुर्चौडीमा सहिद परिवारलाई राहत, ज्येष्ठ नागरिकको घरमै उपचार
बाँकेको खजुरामा ५३ विद्यालय भवन निर्माण
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सम्पूर्ण ढुवानी सेवा बन्द
स्याङ्जाको वालिङमा सिसी क्यामेरा जडान
शेयर बजार सम्बन्धी वर्कसप तथा तालिम सम्पन्न